February 8, 2021 - Padaethar
ညီမလေး ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင် ည အိပ်ယာ ဝင်တိုင်းရှိခိုးပြီးအိပ်….
February 8, 2021 by Padaethar
တကယ်ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းလေး ဆိုတာဒီလိုပါ” အနာဂါတ် အစီအစဉ် တခုခု သင့်အတွက် ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ် ►သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး သင့် ဆန္ဒ ကို လိုက်လျောပေးတတ်တယ်… ►အပိုငွေကုန်ပေါက်တွေ အပျော်အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲတာတွေ လျော့ပြီး သင့်အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အသုံးချတတ်ပါတယ်… ►သုံးနေကျ Password ဖွင့်ပြောပြတာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ် လျှိဝှက်ချက်ဆိုတာ သူနဲ့သင့်ကြားမထားတတ်တော့ပါဘူး။ ►ဘာပဲလုပ်လုပ် သင့်ဆီက ခွင့်တောင်း တတ်ပါတယ်….တချို့ကိစ္စတွေအတွက် အကြံဉာဏ် တောင်းတတ်တယ်။ ►သင်နှစ်သက်တဲ့ အစားအသောက် (ဒါမှမဟုတ်)သင်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတခုခု လမ်းကြုံတွေ့တဲ့အခါ ဝယ်လာပေးတတ်တယ်။ ►သင် အပြုအမူတိုင်းဟာ သူ့အတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ►စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ ပြဿနာ ကို ပြေလည်အောင်ပြောပြတတ်တယ် ။သင်မှားနေရင်တောင် တခါတလေ သူ့ဘက်က မာနကို လျော့ချထားတတ်ပါတယ် ►သင် … Read more
ဒီအနမ်း (10) မျိုးထဲက ကျနော့် ချစ်သူကို မေးကြည့်တယ်။ ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်သလဲ လို့ ။ သူကတော့ တစ်မျိုးစီ ကြိုက်တာချည်း ပါပဲ တဲ့။ အဲဒါကြောင့် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ကျား မ မရွေး စားသုံးနိုင်ပါ စေကြောင်း ရည်စူးပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။ (1) ရေတံခွန်အနမ်း ချစ်သူလေးနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ တောင်အမြင့်ပေါ်က စီးကျလာတဲ့ ရေတံခွန်လို ချစ်သူ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွေ့ဖက်ထားပြီး အားပါးတရ တလစပ် နမ်းခြင်း (2) ရွှင်ပျော်ပျော်အနမ်း ချစ်သူ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ယားတတ်တဲ့ နေရာတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တို့ ဆိတ် ရင်း ရယ်ရွှင်လာ အောင်လုပ်ပြီးမှ နမ်းခြင်း … Read more
အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၆)ချက်
ချစ်သူရွေးကြတဲ့အခါ ဘယ်လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ရွေးကြမှာလဲ။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ideal type တွေက မတူကြပေမယ့် အချစ်ရေး ကံကောင်းချင်ကြတာကတော့ လူတိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်…. (၁) သင်လုပ်သမျှအရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တတ်တယ် သင်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား ပုံစံကအစ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အလယ်၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ဆိုင်တာတွေအဆုံး … သူ့အမြင်မှာ အပြစ်တင်စရာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လူရွေးမမှားဘူး ဆိုရင်တောင် မှန်တော့ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြောရ မှာပါ…။ (၂) စကားပြောမှားသွားမှာအမြဲစိုးရိမ်နေရတယ် တခါတရံ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပြောနေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိတဲ့ အထိပါပဲ။ … Read more
လူရှင်းရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲများ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ….
ဒီ ပို့စ် ဖတ်မိတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေး တိုင်းအမှားအမှန် သင့် မသင့် ချင့်ချိန်နိုင်ပါစေ….အချစ် ဆိုနာလူသားတိုင်း မကင်းဘူးထင်ပါတယ်….အရှက်တရားကင်းမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အချစ်စစ် မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်…. မိမိ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ နိမ့်ကျမှု့ကိုပြသပေးနေသလိုပါဘဲ …တက္ကသိုလ် ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မိန်းကလေး အများစု သတိပြု့သင့်ပါတယ် ….ရဲ တွေက လူဆိုး သူခိုး ဖမ်းဖို့ထက် လူ တော်သလင်း အတွဲ တွေဖမ်းနေရသလိုဖြစ်နေတာ မကောင်းပါဘူး …. စိတ်ပျက်စရာပါ …ရဲ aတွက အလုပ်အား အချိန်ပိုလို့ ဒီလို လိုက်ပြီး ဖမ်းဆီး ပညာပေး နေတာမဟုတ်ပါဘူး …ချုံမြင်တိုး စုံတွဲ များ ရဲစခန်း ကို မရောက်ချင်ဘူးဆိုရင် ရဲ ပြောတဲ့စကားကို နားထောင်ပေးပါ။ မောင်တို့ ..မယ်တို့ … Read more
အမေစုရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပြီ
အမေစုရဲ့ လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို ဆရာ စံဇာဏီဘို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပြီ အကြောင်းအရာကတော့ ၈ရက်နေ့ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန် ၉ရက်နေ့မှာ အရာရာသတိနဲ့ယှဉ်ရတော့မယ်။ ၁ဝရက်နေ့မှာ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးသွားပူးမယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ ဂြိုလ်ခြောက်လုံးပူးမယ်။ အဲ့ဒီချိန်မှာ အင်တိုက်အားတိုက် သုံးရက်ရှိတယ်။ ၁ဝရက် ၁၁ရက် ၁၂ ရက် အဲ့ဒီရက်သုံးရက်မှာ အားအင်အပြည့်နဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင် အခြေအနေထူးခြားစွာ ကောင်းမွန်မယ်။…..နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဇာတာမှာ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်က မူလလအနေအထားမှာ အင်မတန်အားကောင်းပြီးတော့ အခြေအနေမြင့်မားစွာတည်ရှိနေတဲ့သဘာဝ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ။ ဇန်နဝါရီ ၃၁ကစပြီးတော့ အမေစုပေါ်မှာ မတရားတိုက်ခိုက်ပြီး အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အနေအထားကိုရောက်တာ။…. ၂၁ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီမှာ အတည့်ပြန်သွားမှာ။ အဲ့ကျရင် အမေစုရဲ့ကံကြမ္မာကို ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်လို့မရပဲ အတည့်ပြန်သွားမယ်။ ဒီအနေအထားမှာ အားလုံးက ကောင်းသောဆုတောင်းခြင်းကို … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၁၀)ချက် ယောက်ျားလေးတွေဟာ နေ့နဲ့ညကဲ့သို့ ကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာသူတို့ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနှင့် ဆုံတွေ့လာရင်တော့ သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အောက်ဖော်ပြပါအရာတွေနဲ့ တူညီစွာဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ ( ၁ ) သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကိုင်ပေးထားမယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား အခြားသူတွေရဲ့ အထင်သေးခြင်း အောက်ကျနောက်ကျသလို အထင်ခံရခြင်းတို့ကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ တကယ်လို့သူတို့ဟာ သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် ဒါမှမဟုတ် …. အခြားပစ္စည်းတွေကို ကိုင်ပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ထင်မြင်သမျှကို ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ကိုအောက်ကျို့ခြင်းမဟုတ်ပဲ သင့်ကိုသူတကယ်ချစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ ( ၂ ) အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းများကိုဝယ်ပေးခြင်း သင့်ကိုသင့်ချစ်သူက တကယ်ချစ်ကြောင်းသိနိုင်ဖို့နောက်တစ်နည်းကတော့ သင်လိုအပ်လာတဲ့အခါတိုင်း သူတို့ကသင့်အချစ်ကိုပိုမိုရရှိဖို့ ဘာမဆိုဝယ်ပေးမှာပါ။ စတိုးဆိုင်ထဲမှာ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတဲ့ အခိုက်အတံ့ကို သူတို့ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး။ သင်ပျော်ရွင်ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာ … Read more
” စော် “အထာမှာ ဆရာကျတဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့မာယာဆိုတာ…မိန်းကလေးတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်…
သင့်ချစ်သူကသင့်ကို တန်ဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ
သင့်ချစ်သူကသင့်ကို တန်ဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ ချစ်တယ်လို့ပြောတာက တယောက်ယောက်ကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ခံစားချက်တွေဖော်ပြတာက တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။ တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီး တချို့က အပြုအမူနဲ့ပြပါတယ်။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကို လုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေက ဒေါသထွက်စရာ စိတ်ပျက်စရာတွေလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ BrightSideက သင့်ချစ်ရတဲ့လူတွေလုပ်ပြတဲ့ အပြုအမူတွေက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာ ပြောစရာမလိုအောင် သိဖို့နည်း ၆နည်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။သင်ပြောတာတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလို နားထောင်တယ် သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ပျေါ်စရာကော၊ဝမ်းနည်းစရာကောကိုနားထောင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်၊သူတို့ကနားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ … သင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါ တန်ဖိုးထားနေတယ်လို့ပြတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးကိုပိုခိုင်မာပြီးရိုးသားမှုရှိလာအောင်လုပ်နေတာပါ။ ၂။သင့်ရဲ့အချွဲအနွဲ့တွေကိုကြိုက်တယ် သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ချွဲနွဲ့ရတာလဲ ဆက်ဆံရေးတခုမှာ ပျော်စရာပါပဲ။သင့်လက်တွဲဖော်က သင့်ကိုချွဲရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင် သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကို ပိုကောင်းစေချင်ပြီး တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒါတင် မကပါဘူး။နဖူးကိုနမ်းခြင်းနဲ့အနောက်က သိုင်းဖက်ခြင်းတွေက စကားလုံးတွေမပါဘဲ သင်ကအရေးကြီးကြောင်းကိုပြနေတာပါ။ ၃။သင့်ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးတယ် ဆက်ဆံရေးတခုဆိုတာက သင်တို့အချိန်တွေ ထပ်တူကျတာမဟုတ်သလို တနေကုန်စာပို့နေလို့လဲမရပါဘူး။နေ့တနေ့ကုန်သွားရင် မတူတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေအတွက် ရှင်သန်ကြတာပါ။ … Read more
February 10, 2021 February 8, 2021 by Padaethar
သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့ မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်..။ မဆိုင်သူများမဖတ်ရ..။ ကောင်းပါပြီ မပြောခင်ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ပြောပြတဲ့လူအကြောင်းကိုသိခြင်းဟာပြောမယ့် စကားကို ပိုပြီးလေးနက်စေတယ်ထင်မိလို့ပါ။ ကျွန်တော် Minctionary ပါ။ ဒီကလောင်နာမည်နဲ့အတူ နာမည်ကြီးခဲ့တာက ပွင့်ကြေဖတ်ကြွေဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ။ မိန်းကလေးတွေဖက်က အလိုမလိုက်ဖို့ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်မြှင့်ဖို့အကြောင်း ယောကျာင်္းယုတ်တွေအကြောင်း အသိပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းတွေဘဲအပ်ကြောင်းထပ်ပြီး တစ်ရာဖိုးသုံးပုဒ် stupidity တွေဘဲဖြန့်မိသလိုဖြစ်မှာစိုးတာရယ်။ ဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးကာလဖြစ်ခဲ့ရတာတွေရယ်။ လာတိုင်ပင်ကြတဲ့လူအများစုရဲ့ဇာတ်လမ်းပေါင်းစုံကြားထဲမှာ စိတ်တွေညစ်ညူးလာတာတွေရယ်ကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်သေးတာပါ။ ပြီးတော့ Page မှာတင်တိုင်း ကိုယ့်အကောင့်ကိုလူမသိစေဘဲ page သက်သက်သာတင်ပါတယ်။ တကယ်၍သာ အကောင့်နဲ့တွဲပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း ဆယ်လီ ဆယ့်တစ်လီ တစ်ဦးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ စပြောရအောင်…..ကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးက သူနဲ့အိပ်ပြီးလို့မသန့်တော့ပါဘူး ဆိုတာကိုဘဲ။အဲ့ဒါကဘာမသန့်တာကိုပြောချင်တာလဲမသိဘူး။ HIV ကူးလာလို့လား ဒါမှမဟုတ် sexually … Read more